Kacha mma ụdaolu na ngosi maka gam akporo free | Gam akporosis
Paul Aparicio | | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Ọ bụ ezie na na gam akporo anyị nwere ike gbanwee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke onyonyo nke ekwentị ma ọ bụ mbadamba anyị, ihe mbụ m na-agbanwekarị mgbe ekwentị ọhụụ dabara n'aka m bụ ihe m ga-anụ mgbe ha kpọrọ m ma ọ bụ nata ozi. Ekwesịrị m ikwupụta na m na-emekarị ụda ahụ n'onwe m (ugbu a ana m ebu ụda site na egwuregwu '80s Tehkan World Cup), mana ọ bụrụ na ịnweghị otu ihe ọmụma dịka m nwere, ị nwere ike nweta ihe kachasị mma free ụdaolu na weebụ, jiri ngwa ma ọ bụ na-eme aghụghọ.
Na nke a, m ga-ekwu maka ọtụtụ nhọrọ. Nke kachasị mfe nwere ike ịbụ nke mbụ n'ime nhọrọ ndị m ga-atụle, ngwa akpọrọ Zedge Ụdaolu & na akwụkwọ ahụ aja na-enye anyị na ngwa free ụdaolu nke anyị nwere ike iji na ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ.
1 Zedge Uda olu na akwụkwọ ahụ aja
2 Audiko tondaolu maka gam akporo Pro
3 Mbon ntịme
5 YouTube, nhọrọ nke anaghị ada ada
Zedge Uda olu na akwụkwọ ahụ aja
Zedge ụdaolu & na akwụkwọ ahụ aja na-enye anyị na-ekwe omume nke budata ihe kacha mma ụdaolu, ụdaolu na ma Ọkwa kpọmkwem site na ngwa gam akporo n'onwe ya. Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, ọ dị mfe iji ngwa nke, na mgbakwunye na ụdaolu na nkwupụta n'onwe ya, na-enyekwa anyị nhọrọ ndị ọzọ dịka nbudata egwuregwu akwadoro, nbudata akwụkwọ ahụaja kachasị mma ma ọ bụ nbudata akwụkwọ ahụaja kachasị mma maka gam akporo .
Site n'otu ngwa anyị nwere ike ịhụchalụ ọdịyo, budata ụdaolu ahụ n'efu ma debe ha dị ka nke ndabara, ihe enwere ekele maka ịme ka usoro nke ịgbakwunye ụda ọhụrụ dị mfe. Nke kachasị mma, ihe ọ bụla nke nnukwu ngwa a na-eme free na-enweghị njikọta ịzụrụ ihe. Givesnye na-enyekwu ihe?
Audiko tondaolu maka gam akporo Pro
Ngwa ọzọ na-atọ ụtọ nke nwekwara ibe weebụ es .Da Audiko maka gam akporo Pro. Ọ bụ ezie na web ama ama na ngwa ahụ dị ka nke zuru ezu karịa nke gara aga, etinyeghị m ya na mbu n'ihi na enwere ụfọdụ mmachi na-emeghe site na ịzụta ihe.
N'ọnọdụ ọ bụla, Audiko bụ nhọrọ dị ukwuu nke na-enye ọtụtụ egwu ma na ngwa ya na weebụsaịtị ya. Ọ bụrụ na m kwuo na ọ dị ka ọ zuru ezu karịa nke gara aga, ọ bụ n'ihi na ọ dịkwa na-enye anyị ohere idezi ụda, nke ahụ bụ, ọ nwere nchịkọta akụkọ nke na-enye anyị ohere iwepụ mpempe ihe kachasị amasị anyị, gbakwunye na ịpụ na anyị nwekwara ike idezi egwu ndị anyị chekwara na ngwaọrụ gam akporo anyị. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọtụtụ zuru ezu, mana na-adịchaghị mfe karịa nke Zedge.
Ugbua kwuru abụọ ngwa na-enye anyị free ụdaolu, Echere m na ọ bụ oge na-aga ikwu banyere ibe weebụ na usoro aghụghọ ndi ozo. Akwụkwọ mbu m ga-ekwu bụ mog.orb, ebe anyị nwere ike ịchọ egwu ọ bụla ma ọ bụ ụda ọ bụla. Dị ka ihe atụ, i nwere ike ime ule site na-achọ "minion" na ị ga-ahụ na ọ na-enye anyị ọtụtụ nsonaazụ, otu nke bụ na-achị ọchị nke a minion, ama song "Banana" na a otutu ụda nke ama minions nke Gru. O doro anya na, a na-atụ aro na peeji nke.
Ọfọn, mgbe ị kwusịrị banyere ngwa abụọ na-adọrọ mmasị na ibe weebụ nwere ọtụtụ ụda, oge eruola ka anyị kwuo maka ibe weebụ ụda ntakịrị ... dị egwu. Dịka m kọwara na mbido akwụkwọ a, ọ masịrị m ịmepụta ụda nke m n'ihi na, n'otu akụkụ, a bụ m obere geek n'echiche a; iji egwu egwuru mgbe ị tụbara mkpụrụ ego na igwe arcade site na 80s dịka ụdaolu abụghị ihe ọtụtụ mmadụ na-eme. N'okwu m, Egwuru m egwuregwu na MAME emulator iji rute ụda egwu Tehkan World Cup atọ, mana emekwara m ihe ndị ọzọ dịka nke m ga-akọwa n'isiokwu na-esote.
Kọwaa nke a, Udaolu bụ ibe weebụ aha ya na-akọwa ihe niile. Na weebụsaịtị a anyị agaghị ahụ ọtụtụ egwu ma ọ bụ ụda olu ama, mana anyị nwere ike ịchọta ndị ọzọ ga-eme ka anyị mụmụọ ọnụ ọchị. Dịka ọmụmaatụ, ugbu a na Rogue One nọ na ụlọ ihe nkiri, ọ bụrụ na anyị achọ "Star Wars" anyị ga-ahụ Chewbacca na-abụ abụ "Silent Night" (ka ị na-agụ). Ihe atụ ọzọ nke ihe anyị ga-ahụ na webụsaịtị a bụ ma ọ bụrụ na anyị chọọ "Street Fighter", nke m bụ egwuregwu ọgụ kachasị mma na akụkọ ntolite, dị ka isiokwu Guile na piano, olu nke na-ekwu "Win Nwee Mmeri, Zuru oke» ma ọ bụ ndị ọzọ olu nke ndi protagonists. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụrụ na ịchọghị ịchọ ndụ dị ka m mere na Tehkan World Cup, Udaolu ị nwere mmasị.
YouTube, nhọrọ nke anaghị ada ada
Nhọrọ nke na-adịghị ada ada inweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vidiyo ọ bụla YouTube. Ọ naghị ada ụda n'ihi ụda, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ vidiyo nwere onyogyo ka anyị wee nwee ike ịnụ ụtọ egwu ma ọ bụ ụda. N'iburu nke a n'uche, ihe nyeere m aka ma zọpụta m ịrụ ọrụ n'ọtụtụ oge na-achọ ụda na ọrụ vidiyo nke Google nwere.
Na nso nso a, enweghị m ike icheta ihe kpatara ya, ekpebiri m na ụdaolu m ga-abụrịrị egwu sitere na mbibi egwuregwu (dị site na ebe a). Anyị maara aha egwuregwu ahụ, mana "Mbibi" pụtara "mbibi", yabụ anyị ga-etinye ihe ọzọ iji chọta ihe masịrị anyị. Ihe na-arukarị m ọrụ bụ itinyekwu okwu abụọ: HQ nke mere na ọ nwere ọtụtụ mma yana Isiokwu, nke ga-asụgharị dị ka isiokwu bụ isi.
Anyị ahọrọla egwu anyị chọrọ ịbụ ụdaolu anyị ma ugbu a anyị ga-ebudata ya. A dị mfe aghụghọ bụ Tinye "ss»Tupu okwu«youtube« na url na kụrụ banye. N'ihe atụ nke isiokwu Mbibi, URL ga-adị ka nke a https://www.ssyoutube.com/watch?v=v5Nz_V3C6zo. Nke a ga-akpọrọ anyị gaa na peeji nke savefrom.net, site na ebe anyị nwere ike ibudata vidiyo ma ọ bụ ọdịyo na MP4.
Ọ bụ ezie na m na-ekwukarị okwu banyere usoro nke abụọ S tupu, enwere weebụsaịtị ọzọ dị ọtụtụ karịa nke anyị ga-enweta site na ịgbakwunye «nwere ike" n'ihu "youtube«. Site na weebụsaịtị a, nke ihe nchọgharị na-achọpụta dị ka ihe dị ize ndụ (ikekwe n'ihi na ha enweghị ike ịghọta akara ndị ahụ), anyị nwere ike ibudata vidiyo na AVI ma ọ bụ ọdịyo ya na MP3, nke ga-ahapụ ya dị njikere iji ya na ngwaọrụ gam akporo ọ bụla.
Ọ bụrụ na m kwuru nhọrọ YouTube ikpeazụ, ọ bụ n'ihi na ọ bụghị nke kachasị mfe. Ozugbo anyị nwere ọdịyo ebudatara, anyị ga-agbakwunye ya dị ka ụda na ama ma ọ bụ mbadamba gam akporo anyị na usoro a dị iche na ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụ ya mere na enweghị m ike ịgbakwunye ozi niile na post a. Mana nke bụ eziokwu bụ na enweghị m ike ịkwụsị ikwu maka nhọrọ m jirila ọtụtụ oge maka Echere m na ọ kachasị mma.
Gịnị bụ gị họọrọ usoro iji nweta free ụdaolu maka gam akporo ngwaọrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Ihe kacha mma free ụdaolu, ụdaolu na ngosi gị gam akporo
Ngwa kachasị mma maka ụdaolu na-ada n'enweghị obi abụọ bụ nke a:
Gina bates dijo
Ọ dị ezigbo mma, ụda mp3 na-eme m obi ụtọ na ụda ya pụrụ iche.
Zaghachi Gina Bates
The Xiaomi Mi 6 ga-ewetara a curved ihuenyo na 6GB Ram